बिग बोसका लभ बर्ड करण कुन्द्रा-तेजस्वी प्रकाशको घरमा के शहनाई छिट्टै बज्ला ? बिहेबारे अभिनेताका बुवाले गरे यस्तो खुलासा – Jagaran Nepal
बिग बोसका लभ बर्ड करण कुन्द्रा-तेजस्वी प्रकाशको घरमा के शहनाई छिट्टै बज्ला ? बिहेबारे अभिनेताका बुवाले गरे यस्तो खुलासा
बिग बोस १५ मा करण कुन्द्रा र तेजस्वी प्रकाशको प्रेमकथाको निकै चर्चा भएको थियो । सिजन १५ को सबैभन्दा ठूलो आकर्षण उनीहरूको प्रेम कथा थियो। करण कुन्द्रा र तेजस्वी अहिले बीबी हाउसबाट बाहिरिएका छन् । दुवैको विवाहलाई लिएर फ्यानमा उत्साह छ । करण र तेजस्वीको चाँडोभन्दा चाँडो विवाह होस् भन्ने उनीहरु चाहन्छन् ।
करण कुन्द्राका आमाबुवा पनि यस्तै चाहन्छन् । आइतवार, जब करण कुन्द्राका आमाबाबु बिग बोसको फाइनलमा देखिए, पापाराजीले उनलाई करण कुन्द्राको यात्रा र तेजस्वी प्रकाशसँगको सम्बन्धको बारेमा प्रश्न गरे। करण कुन्द्रा र तेजस्वी प्रकाशको विवाह योजनामा प्रश्न सोधिएको थियो, तपाईंले करण र तेजस्वीको सम्बन्धलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ ?
के अब उनीहरु कहिले विवाह गर्दैछन् ? यसको जवाफमा करण कुन्द्राले भने–यदि यस्तो भयो भने छिट्टै गर्छु । करण कुन्द्राका बुबाले तेजरनका फ्यानहरूको मनको कुरा गरे। बीबी घरबाट निस्किएपछि करण कुन्द्रा र तेजस्वी प्रकाशलाई पनि पापाराजीले सँगै देखेका थिए । यो जोडीलाई सँगै देख्दा फ्यानहरुको खुसीको कुनै ठाउँ छैन । करण कुन्द्रा र तेजस्वीको बिग बोस यात्राको बारेमा कुरा गर्दा तेजस्वी सिजन ज्ञछ को विजेता भइन् । करण कुन्द्रा सेकेण्ड रनरअप हुदा प्रतीक सहजपाल फस्ट रनरअप भएका थिए ।